Gbasara anyị - Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Tidy Ejiji Trading Co., Ltd.hiwere na 2011. Onye nwe ya nwere ihe karịrị iri abụọ na afọ iri abụọ na ahia ahia na onwe anyị mmepụta eweta, anyị na-now n'ichepụta na sourcing dị iche iche na ngwaahịa maka mbupụ ahịa zuru ụwa ọnụ. isi ahia anyi bu Europe, North na South America, Africa, na Asia.
Ka ọ dị ugbu a, isi ihe anyị gụnyere uwe eji arụ ọrụ, akwa mmiri ozuzo, ngwaahịa ndị dị n'èzí, ngwaahịa ụlọ, ngwaahịa nkwado na ihe plastik. Anyị na-enye ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ nhọrọ nke nha, akara ule, agba na ụdị. O doro anya na ị ga-enwe ike ịchọta ihe ga-adabara gị mkpa. Ọzọkwa, anyị na-eji njikwa mma akpọrọ ihe. Na-enyocha ngwaahịa na usoro nrụpụta niile, anyị na-emesi gị obi ike na anyị na-enye naanị ihe kachasị mma.
Dika ulo oru anyi bawanye na ahia anyi na acho ndi ahia ohuru. Biko kpọtụrụ anyị ugbu a na nkọwa gị zuru ezu. Ajuju obula ga achota.
Shijiazhuang Tidy Ejiji Co., Ltd. bụ ọkachamara mmiri ozuzo na workwear rụpụta ekspootu. Odude ke edem edere china, emi ekperede Beijing. Anyị bụ otu n'ime ndị na-eduzi na-emepụta n'ebe ugwu nke China maka ụdị mmiri ozuzo ọ bụla, uwe, ihe Baby na ihe ndị ọzọ plastik
Anyị nwere ụlọ ọrụ plastik anyị nwere n’obodo anyị. N'inye ndị ọrụ 200 ọrụ, 30 n'ime ndị ọrụ a bụ ọrụ maka usoro ụzọ (td), njikwa njikwa (qc) yana usoro njikwa. Ọ bụ ezie na ndị òtù TD niile nwere ọ dịkarịa ala 20years nke ahụmịhe dị mkpa, ndị ọrụ QC bụkwa ndị ọkachamara n'ịhazi mmepụta na ịhazi usoro iji nyefee. ọ bụghị naanị na anyị enwetawo ahụmịhe azụmaahịa mba ụwa bara ụba, kamakwa merie aha ndị ahịa site na akọ na uche anyị n'ebe ọrụ dị.
Ngwaahịa anyị na-ekpuchi: PVCkwanyere, PEVA, EVA, Pee, ịkwanyere / Polyester / ịkwanyere, 100% naịlọn mmiri ozuzo, naịlọn (Taffeta / Oxford / Ripstop), 100% Polyester (Taffeta / Micro / Twill), 100% Cotton, T / C workwear, adụ shei Jaketị, wdg. anyị nwere zuru uru na price, àgwà, na nnyefe oge. Nke a bụ uru anyị pụrụ iche na nke kasịnụ.